I Love Travellings . . . | A journey ofathousand miles must begin withasingle step.
Posted by ဇေယျလင်းထင်	| November 5, 2011 | Categories: Myanmar | Leaveacomment
Posted by ဇေယျလင်းထင်	| October 27, 2011 | Categories: Malaysia | Leaveacomment
Genting Highland သို့ ၃ ရက်တာ (အပိုင်း – ၁)
တီ…. တီ…. တီ…
ညက မနက်၎း၀၀ နာရီ နိုးစက်ပေးထားသဖြင့် ဖုန်းမှထမြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထုပ်အပိုးပြင်နေသဖြင့် အိပ်ရာဝင်နောက်ကျသောကြောင့် မျက်လုံးက သိပ်မဖွင့်ချင်ဖြစ်နေသည်။ ဒါပေမယ့် မထလို့မဖြစ်… လေယာဉ်ချိန်က မနက် ၇း၄၅၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Check-in က ၁နာရီခွဲ စောဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၃ရက်ကြိုတင်ပြီး အွန်လိုင်း Check-in ၀င်ထားသောကြောင့် လေဆိပ်ကို ၆း၃၀ လောက်ရောက်လျှင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တခုတခုဆို ကြိုတင်လုပ်လေ့ရှိသော ကျွန်တော့်အကျင့်ကြောင့် အစောကြီးနှိုးစက်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
မျက်စိကို အတင်းဖွင့်ပီး ကုတင်ပေါ်မှဆင်းကာ တခြားသူငယ်ချင်းတွေကို အိပ်ရာမှထရန် SMS ပို့လိုက်သည်။ နောက်လိုအပ်သည် အရာများမမေ့ရန် သတိပေးလိုက်ရသေးသည်။ ပထမဆုံး ရီပလိုင်းပြန်လာသူက Cherry၊ အဲဒီနောက် A.A၊ Pamela ကတော့ အိပ်ကောင်းတုန်း.. သူကတော့ သူ့ချစ်ချစ်ကြီးက လိုက်ပို့မှာဆိုတော့ အေးဆေးပေါ့။
ရေချိုးအ၀တ်အစားလဲ ပြီးတော့ Cherry ဆီကို SMS ပို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ကျွန်တော်ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတာကို လှမ်းမေးတော့ ရယ်ဒီပဲတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဘုရားကန်တော့ ပြီးအထုတ်ဆွဲကာ အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ Taxi ငှားကာ Cherry နေထိုင်ရာ Ang Mo Kio ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ သူ့လမ်းထိပ်ရောက်တော့ အဆင်သင့် သူ့ကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ၂ ယောက်သား A.A နေထိုင်ရာ Bedok ကိုဆက်သွားကြတယ်။ ရောက်တော့ သူ့ကိုခေါ်ပြီး လေဆိပ်ကိုဆက်သွားကြတယ်။ လေဆိပ်ရောက်တော့ ၆း၀၀ ရှိပြီ။ စောတော့ စောသေးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ၀င်ရမယ့် ဂိတ်ပေါက်ရှေ့က ထိုင်ခုံတွေမှာ ထိုင်ရင်း နောက်လူတွေကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ သွားကြမယ်သူတွေက စုစုပေါင်း ၂၅ ယောက်၊ လေယာဉ်ချိန်တွေကမတူဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပထမအသုတ်မှာ ၉ ယောက်ပါတယ်။ ၆း၃၀ မှာတော့ လူစုံသွားပြီ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အထဲကို ၀င်လာခဲ့ကြတယ်။ အထဲရောက်တော့ Duty Free ဆိုင်တွေမှာ Window Shopping ပေါ့။ ၇း၁၅ လောက်မှာ Announce အသံကြားရတော့ အတွင်းထဲထိဝင်လာခဲ့ပြီး စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ အထုပ်တွေအစစ်ဆေးခံပြီး နောက်ဆုံးဂိတ်ပေါက်ဝထိရောက်လာပြီ။ ခဏနေတော့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ကြတယ်။
စီးမယ့်လေကြောင်းက Air Asia လိုင်း၊ ပထမဆုံးစတွေ့တာက လေယာဉ်မယ်လေးပါ (Air Asia မှ လေယာဉ်မယ်များ သိပ်မချောကြပါ)။ နောက်တော့ ကိုယ်ထိုင်ခုံ ကိုယ်ရှာ၊ အိတ်ကို ပေါ်က အထုပ်ထားတဲ့ စင်မှာတင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ထိုင်တာက နောက်ဆုံးခုံ၊ ကျွန်တော်နောက်မှာ Toilet ပဲရှိတော့တယ်။ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ထိုင်သူက Aurther.. အဲဒီအချိန်မှာပဲ လေယာဉ်မယ်လေးက အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကို သရုပ်ပြတယ်။ ထိုင်ခုံခါးပတ်၊ အသက်ကယ်ဝတ်စုံ ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့။
၁၀မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါလဲပြီးရော လေယာဉ်စထွက်ဖို့ အချက်ပေးသံမြည်လာပြီး လေယာဉ်က ပြေးလမ်းရှိရာကို တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ မောင်းထွက်လာပါတယ်။ ပြေးလမ်းပေါ်ရောက်တော့ လေယာဉ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်လာပီ ၂မိနစ်အတွင်းမှာပဲ မြေပြင်နဲ့ လွတ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းအိပ်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ ရဝေနွယ်(အင်းမ)ရဲ့ မင်္ဂလာအတွေးများ စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်း လိုက်ပါသွားပါတယ်။ နာရီဝက်ကျော်ကျော် ကြာတော့ Announcement သံထွက်လာပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွမ်လမ်လာပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုဆင်းတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စာအုပ်ကိုသိမ်းလိုက်ပြီး ဘေးပြတွင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လေဆိပ်ကို ခပ်ရေးရေးမြင်နေရတယ်။ လေယာဉ်ကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုမ့်ဆင်းလာပြီး ခဏအတွင်းမှာ လေယာဉ်ဘီးနဲ့ ပြေးလမ်းထိသွားတာကို သိလိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အရှိန်လျှော့လာပြီး လေယာဉ်ရပ်သွားပါတယ်။ နောက် အထုပ်ဆွဲပြီး လေယဉ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပါတော့သည်။ လေယာဉ်ရပ်လိုက်တဲ့ နေရာက LCCT လို့ခေါ်တဲ့ Air Asia လေယာဉ်များသာ ဆင်းတဲ့ ကွန်ပေါင်းတခုပေါ့။
ပထမဦးဆုံး မလေးရှားမြေကို ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ စတင်နင်းကာ မလေးရှားလေကို တ၀ကြီးရူရှိုက်လိုက်ပါတော့သည်ခင်ဗျာ။